3 iPhone Explorer Apps Free Waxaad From Management daalin
3 iPhone Explorer Apps Waxaad Hubi buuxda Helitaanka in Faylal ay ku iPhone
iPhone shaki ku jirin in uu yahay mid ka mid ah ugu iibinta smart-telefoonada ee adduunka maanta. Waxaa loo iyo suuq by Apple Inc. iPhone ayaa hareeyay suuqa tan iyo markii ay sii daayo oo waa mid ka mid ah noocyada ugu guulaha badan category phone smart. Iyadoo sii daayo kasta oo cusub, size kaydinta iPhone ay sii kordha cabirkooda, taas oo ka dhigaysa qalab tiro-kaydinta macquul ah u isticmaala. The iPhone awoodda kaydinta bixiya oo safafka ka 16GB in 64GB, waxaana laga yaabaa in ka badan ee qoraalkii soo socda. Aan soo laabtaan si ay u barta. Sidaas waxa loo isticmaali karaa sida disk adag saari karo in uu kaydiyo faylasha aad muhiim u ah in aad qaadi karaan meel kasta oo aad rabto in aad. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtogal ma aha in aad u aragto oo dhan fayl marka aad iPhone xidhmaan your computer. Waa xannibaad ah hirgelinaayo Apple via Lugood ay maktabadda maamulka warbaahinta oo kaliya u oggolaanaysa in qaar ka mid ah files in la beehsa leh qalabka. Haddaba su'aashu waxay baxdo, sida aynu doonayno inaynu u kaydiso faylasha in uma lihin qalabka?
Taasi waa sababta in app sahamisa iPhone yimaado. Waxay ka shaqaysaa in ka badan ama ka yar sida desktop iPhone Explorer -streaming music video iyo in iPhone. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah barnaamijyadooda sahamisa iPhone aad awood kaliya si ay u helaan files aad iPhone. Hoos waxaa ku qoran ugu sareeya 3 barnaamijyadooda sahamisa iPhone laga yaabaa in aad xiiseyneyso.
Qaybta 1. Is barbar dhig ku Top 3 iPhone Explorer Apps
Qaybta 2. Details for kasta Explorer iPhone File
Magaca / Features
Fayl Explorer (Free)
Taageerayaan macruufka macruufka 5.0 iyo ka dib macruufka 5.0 iyo ka dib macruufka 5.0 iyo ka dib
Waxaa la dhisay-in File akhristaha
Document Reader t
Fayl Explorer by Steven Zhang:
Money leedahay qiimaha. Sidaas darteed haddii aynu doonayno inaynu u bixiyaan si ay u iibsadaan software waa inay noqdaan kuwo istaahila. Tani waa mid ka mid ah sahamiyayaal file ugu wanaagsan ee iPhone oo waa mid aad u jaban oo dhan qaababka ay bixisaa. Heli Mac, Linux Windows iyo boosteejo, Server NAS iyo Cloud Storage sida WordPress, Google Drive iwm waxa ay kaa caawinaysaa in aad ka iDevices kasta helaan files. Waxaa la iman dhisay-file akhristayaasha si aad arki kartaa sawirada, ciyaaro duubey iyo sawiro ku baraha bulshada sida Facebook, Twitter iwm Waxa ay taageertaa video iyo geeyo audio iyo sidoo taageeraya video intooda badan iyo qaabab audio sida MP3, MP4 iyo FLV iwm Waxa kale oo aad ka arki kartaa oo ka bedel dokumentiyo qoraal aad oo gargaar ka akhristayaasha Document taageeraya Word, Excel iyo PowerPoint iwm
Fayl Explorer (Free) by Steven Zhang:
Tani waa version a free of app ee kor ku xusan. Waxa ay taageertaa oo dhan dhufto ee ugu waaweyn sida Windows, Mac iyo Linux iyo sidoo kale siinayaa fursado kaydinta wadaniga ah ee aad. Waxaad heli kartaa dhammaan faylasha loo marayo sahamisa this. Waxaa la iman dhisay-in akhristayaasha si ay u helaan sawirada iyo faylasha kale oo iyaga iyo sidoo ordi. Waxaad sidoo kale ku wareejin karo files dhexeeya computer iyo qalab macruufka badan Wi-Fi.It sidoo kale taageertaa geeyo audio iyo video sidoo. Sidaas asal ahaan waxa uu leeyahay oo dhan qaababka sida ay version bixisay. Laakiin waxaa jira had iyo jeer wax la waayay. Haddii aadan haysan doorasho ay ku kaydiso ku storages daruur sida WordPress, Google Drive iwm taas oo ah mid ka mid ah khasaaraha app this. Ha ka welwelin. Waxaad had iyo jeer u cusboonaynta kartaa in nooca buuxda ula $4.99 oo kaliya.
Fayl Manager by TapMedia Ltd:
Tani waa mid kale sahamisa file iPhone diyaar u ah oo lacag la'aan ah si ay u helaan files aad iPhone. Waxaa u dhaqmo sida drive dalwaddii USB ee dhammaan iDevices ah. Si fudud Waxaad ka arki kartaa sawirada la akhristayaasha dhisay-in. Waxa kale oo ay taageertaa geeyo audio iyo video. Waxa ay taageertaa daruuro badan sida WordPress, Skydrive iwm Waxaad ka PC / Mac isticmaalaya Wi-Fi ama USB wareejin karaan faylasha. Waxa kale oo aad la wadaagi karto files by Bluetooth oo waa dhibic oo lagu daray iyo sidoo kale by email. Waxaa la iman dhisay-in feature raadinta. Waxay abuuri karaan iyo ZIP soosaaray aad u gudbiyo.
Top 5 Mac Nadiifinta Software m
> Resource > iPhone > 3 iPhone Explorer Apps